Abakhangisi Nokufunda Komshini: Kuyashesha, Kuhlakaniphile, Kuyaphumelela | Martech Zone
Abakhangisi Nokufunda Komshini: Kuyashesha, Kuhlakaniphile, Kuyaphumelela
ULwesithathu, April 17, 2013 NgoMgqibelo, ngoMeyi 16, 2015 ULara Albert
Emashumini eminyaka ukuhlolwa kwe-A / B kusetshenziswe ngabakhangisi ukuthola ukusebenza kwezinhlinzeko kumazinga okuphendula okushayela. Abakhangisi bethula izinhlobo ezimbili (A no-B), linganisa izinga lokuphendula, nquma onqobayo, bese uthumela lowo mnikelo kuwo wonke umuntu.
Kepha, ake sibhekane nakho. Le ndlela ihamba kancane ngokukhubaza, iyisidina, futhi ayinaphutha - ikakhulukazi uma uyisebenzisa kuselula. Okudingwa ngumthengisi weselula kuyindlela yokuthola ukunikezwa okulungile kwekhasimende ngalinye kumongo onikeziwe.
Ababhalisile beselula baletha inselelo eyingqayizivele uma kukhulunywa ngokuthola indlela efanelekile yokuzibandakanya nokushayela isenzo. Izimo zabasebenzisi beselula ziyaqhubeka zishintsha, okwenza kube nzima ukuthola ukuthi usebenza nini, kuphi nokuthi kanjani. Ukukhulisa inselelo, abasebenzisi beselula balindele izinga eliphakeme lokwenza ngezifiso uma kukhulunywa ngokuzibandakanya nabo ngamadivayisi abo. Ngakho-ke indlela yendabuko ye-A / B - lapho wonke umuntu ethola khona onqobayo - isilela kubakhangisi nakubathengi ngokufanayo.
Ukulwa nalezi zinselelo - nokubona amandla aphelele wabathengisi beselula baphendukela kubuchwepheshe obukhulu bedatha abakwaziyo ukuqhubekisela phambili ukuhlaziywa kokuziphatha kanye nokwenza izinqumo okuzenzakalelayo ukunquma umlayezo ofanele nomongo ofanele wekhasimende ngalinye.
Ukuze wenze lokhu ngezinga, basebenzisa amandla ukufunda imishini. Ukufunda ngomshini kunamandla okuzivumelanisa nedatha entsha - ngaphandle kokuyicacisela ngokucacile - ngezindlela abantu abangenakusondela kuzo. Ngokufana nokumbiwa kwedatha, ukufundwa komshini kusesha inani elikhulu ledatha ekufuneni amaphethini. Kodwa-ke, esikhundleni sokukhipha ukuqonda kwesenzo somuntu, ukufunda ngomshini kusebenzisa idatha ukuthuthukisa ukuqonda kohlelo futhi kulungise ngokuzenzakalela izenzo ngokufanele. Ukuhlolwa kwe-A / B ngokuyisisekelo kukulawula kwejubane okuzenzakalelayo.
Isizathu sokuthi kube ushintsho lomdlalo kubathengisi banamuhla beselula yingoba ukufunda ngomshini kwenza ukuhlolwa kwenombolo yemiyalezo, okunikezwayo nezimo ezingapheli, bese kunquma ukuthi yini okusebenzela kangcono obani, nini, futhi kuphi. Cabanga ngokunikezwa u-A no-B, kepha futhi no-E, G, H, M no-P kanye nanoma iyiphi inombolo yezimo.
Ngamandla okufunda ngomshini, inqubo yokuqopha izinto zokulethwa kwemiyalezo (isb. Ngenkathi zithunyelwa, zithunyelwa kubani, ngamapharamitha wokunikeza, njll.) Kanye nezakhi zempendulo yokunikezwa zibhalwa ngokuzenzakalela. Noma ngabe ukwamukelwa kwamukelwa noma cha, izimpendulo zithunyelwa njengempendulo ezishayela izinhlobo ezahlukahlukene zokumodela ezizenzakalelayo zokwenza kahle. Le loop yempendulo isetshenziselwa ukucubungula izinhlelo ezilandelayo zokunikezwa okufanayo kwamanye amakhasimende nokunye okunikezwayo kumakhasimende afanayo ukuze ukunikezwa kwesikhathi esizayo kube nethuba eliphakeme lokuphumelela.
Ngokuqeda ukuqagela, abathengisi bangachitha isikhathi esiningi becabanga ngobuhlakani ngalokho okunikeza inani elithe xaxa kumakhasimende uma kuqhathaniswa nokuthi ukuletha kanjani noma nini.
Lawa makhono ahlukile, anikwe amandla ngentuthuko ekucutshungweni kwedatha enkulu, ukugcinwa, ukubuzwa, nokufunda ngomshini kuhola phambili embonini yeselula namuhla. Ama-mobile opharetha ngaphambili awasebenzisela ukwakha ukuqonda okuthakazelisayo kokuziphatha kanye nokwenza imikhankaso yokuthengisa ehehayo ekugcineni enethonya ekuziphatheni kwamakhasimende ukwenza ngcono ukwethembeka, ukunciphisa ukukhwabanisa, nokwenyusa imali ngokuphawulekayo.
Tags: ukuhlolwaidatha yebhidiAma-Globysukufunda imishinitesting
U-Lara uyiPhini Likamongameli Wokukhangisa Komhlaba Wonke e Ama-Globys lapho ethatha khona izibopho zokumaketha ezinkampani futhi ehola ukumaketha kokutholwa kwemikhiqizo yenkampani yokuthengisa. Phambilini ubephethe izindima eziphezulu zokuphathwa komkhiqizo nezokumaketha komkhiqizo eKraft Foods, eMelika Online naseVeriSign.
I-Freebase: I-Database Labantu, Izindawo noma Izinto
Ngo-Apr 18, i-2013 ku-4: 12 AM
Kuyathakazelisa impela ukufunda ngezinselelo ezilethwa iselula nokuthi abathengisi bakwazi kanjani ukusebenzisa amandla wekhompyutha ukwethula ngokushesha hhayi okukodwa kokukhethwa kukho okubili, kodwa okukodwa kokukhethwa kukho okuningi. Ukuletha umyalezo ofanele kumakhasimende afanele. Ukucabanga okuphambili okunjalo nokusetshenziswa ngempumelelo kobuchwepheshe.
Ngo-Apr 19, i-2013 ku-2: 18 AM
Ngokuthambekela okusha kwezobuchwepheshe kuhle ukuvuselelwa ngokwenzekayo futhi ube nolwazi maqondana nokumaketha imikhiqizo yakho. Imininingwane emikhulu, uyithande i-athikili yakho!